Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: misy ahafahana mifidy izay tiana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: misy ahafahana mifidy izay tiana
Maro ireo mpilatsaka vonona hifaninana amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny Repoblika. Raha ny isan’izy ireo no jerena dia tokony ho hita taratra ao avokoa ny sokajy sy ankolafy rehetra eto amin’ny fiarahamonina. Asa anefa raha afaka entina hitsinjarana ny fiarahamonina ny fahantrana. Ny hany fantatra dia tsy misy mahantra afaka hijoro ho mpilatsaka. Ny fandraisana an’izay ho zava-misy efa ampy hisarika ny saina fa tsy lafatra ny demokrasia. Ambony latabatra no afaka itenenana izany hoe fitovian-jo izany fa rehefa ety an-tsehatra, tsy miandry ela ary tsy mila fandinihana firy dia mivandravandra ny tsy fitoviana.
Fidiny ho an’iza moa no hiaina ao anatin’ny fahantrana ? Eto indray dia mitranga ny fakam-panahy hionona amin’ny fiheverana fa samy manana ny anjarany eto amin’ity tany ity. Izany fiononana izany anefa indraindray misarika hilavo lefona, miteraka hakamoana, izay antony tsy anaovana ezaka ahazoana misondrotra. Ny fiainana ao anatin’ny fiarahamonina etsy andaniny manampy trotraka noho ny fanjakan’ny setrasetra eo amin’ny fifaninanana tsy misy fitsaharana. Eny amin’ny arabe aza, ny mpandeha an-tongotra mifanosika, ny mpitondra fiara mifampisisitsisika.
Eo amin’ny fandinihana izany toe-draharaha izany no maha zava-dehibe ny fifidianana an’izay ho filoha. Anjara moa no mametraka ny tanjona tiany hanondrotana ny firenena sy ny manazava ny làlana diavina ahatongavana amin’izany. Eo moa ny andraikitra fiantohana ny fiarovana ny olona sy ny fananana ao anatin’ny filaminana. Ao ihany koa ny fametrahana rafitra ahafahana mampiroborobo ny toe-karena sy ahafahan’ny olona tsirairay mivelatra. Tsy azo adinoina anefa fa maro amin’ny mpiray tanindrazana ankehitriny no tsy mahita sehatra ahafahany manao ezaka. Betsaka ohatra ny manana fahavononana hiasa. Vitsy dia vitsy anefa raha ampitahaina amin’izany ny asa mandray mpikarama.
Raha itodihana koa ny tontolon’ny fampianarana, ny sekolim-panjakana izay hatry ny ela sehatra fampisondrotana ahafahan’ireo efa niangaran’ny vintana hanarina an’izany ahafahany hitondra fanatsarana ny anjarany, amin’izao fotoana izao dia ireny sekolim-panjakana ireny indray no mampitombo vesatra amin’ny zana-bahoaka mianatra amin’izy ireny. Fanetribe ho an’ny mpianatra any amin’ny EPP anie ny fanankinana ny fampianarana amin’ny maître-fram.
Fitaka be manadala. Aiza ve ka dia fanondrotana ve no resahana dia fanetrena ny ambaratongan’ny fahaizan’ny mpampianatra ny fomba nosafidina. Fomba fanapoizinana ny zana-bahoaka ! Misy anefa amin’ireo mpilatsaka no midera tena noho ny andraikitra noraisiny tamin’izany asa maloto izany.